Hepatitis B – Healthy Life Journal
All posts tagged "Hepatitis B"
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုး ရှိသူတချို့က ဆေးမြီးတိုတွေ သောက်ကြတယ်။ အစားအသောက် ဘာဖြစ်ဖြစ် စားလို့ရတယ် ပြောကြတယ်။ ကျွန်မမှာ စီပိုးရှိလို့ မျှဝေပေးပါဦးလား။ LM(FB) A. ဘီပိုး၊ စီပိုးရှိသူတွေမှာ...
မေး ။ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး သုံးကြိမ်ထိုးပြီး အောင်ထားသူက နောက်ကာလ ဘယ်လောက်ကြာမှာ ကာကွယ်ဆေး ထပ်မံထိုးရမှာလဲ။ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး မထိုးခင် ဘီပိုးအောင်၊ မအောင် စစ်ရမှာလား၊ ဘီပိုး ရှိ၊ မရှိ စစ်ရမှာလား။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ပြုံးကြည်(ဥက္ကဌ၊...
ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းဆွေ (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး. အသည်းရောင် အသားဝါပိုးတွေအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာမ။ ဖြေ. အသည်းရောင်အသားဝါ အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ၊ အီးဆိုတဲ့ ပိုးတွေရှိတဲ့အနက် ဘီပိုးနဲ့ စီပိုးက နာတာရှည် ရောဂါဖြစ်ပြီး ဒီနာတာရှည်ရောဂါကို မသိဘဲနဲ့နေရင်...
မေး. ဘီပိုးသေဆေး သောက်နေရလို့ ဆင်ခြေထောက် ကာကွယ်ဆေးသောက်လို့ရပါလား။ KyawLin (FB) ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ဘီပိုးသေဆေးဆိုတာ အများအားဖြင့် သုံးမျိုးလောက်ရှိတော့ ဘယ်အမျိုးအစား သောက်နေရသလဲဆိုတာ မသိဘူး။ အခုတိုက်ကျွေးနေတဲ့ ဆင်ခြေထောက်ကာကွယ်ဆေး မတိုက်ခင်မှာ ဘယ်ဆေးတွေနဲ့...
ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ပြုံးကြည် (ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်-ငြိမ်း) ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ အသည်းဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဌနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာမ။ ဖြေ. အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးပါ။ အသည်းရောင်အသားဝါပိုးက A၊ B၊ C၊ D၊ E ဆိုပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး...